आज २०७७ साउन १२ गते सोमबारको राशिफल – Sandesh Munch
July 27, 2020 226
आज २०७७ साउन १२ गते सोमबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रोलोजर राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
Prevअस्पतालबाटै कोरोना संक्रमण ? डाक्टर भन्छन् : वैज्ञानिक आधार छैन
Nextनदीमा तैरिरहेको का’लो सुटकेस खोलेर हेर्दा उ’ड्यो माझीको हो’श
यस्ता ब्यक्तिलाई भुलेर पनि नमस्कार नगर्नूस